Gịnị Mere My iPhone Nọgide Na-amalitegharị? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
aha ọkụ iji kpọọ enyi gị nwanyị
cant jikọọ na wifi na ekwentị
otu esi eme ka ipad nwere nkwarụ
ngosi iphone 6 anaghị agbanye
Gịnị Mere My iPhone Nọgide Na-amalitegharị? Nke a bụ ndozi!
Why Does My Iphone Keep Restarting
Gịnị mere m iPhone na-amalitegharị, gịnịkwa ka m ga-eme banyere ya? Anyị tụkwasịrị obi na iPhones ha na ha ga-arụ ọrụ ha niile oge. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na e nwere otu ihe mere iPhones ji maliteghachi ugboro ugboro, mana enweghị mgbagha anwansi maka nsogbu a. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe na-akpata iPhones ka ịmalitegharịa m ga-egosikwa gị otú idozi ibidogharịa iPhone nsogbu .
Ntị ndị nwe ụlọ iPhone X: Ọ bụrụ n’inwe iPhone X ma ọ bụ iPhone XS nke na - emegharị ọzọ, biko gụọ isiokwu ọhụrụ m iji chọpụta otu esi egbochi iPhone X site na ịmalitegharia ugboro ugboro . Ọ bụrụ na ndozi ndị ahụ anaghị arụ ọrụ, laghachi ma soro ntuziaka a.
Gịnị Mere My iPhone Nọgide Na-amalitegharị?
Ekwentị iPhones na-ebido ịmalitegharia na-adaba ụzọ abụọ:
iPhones na-amalitegharia oge na-adịghị anya: Nwere ike iji gị iPhone maka oge na-enweghị nsogbu na niile, na mgbe gị iPhone na mberede malitegharia.
iPhone Malitegharịa ekwentị loop: Gị iPhone nọgidere malitegharia na ọ bụ kpam kpam unusable. The Apple logo na-egosi na kpamkpam na ihuenyo, ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na iPhone gị dabara na ngalaba nke abụọ, kwụpụ tupu ịmalite 5. Ọ gaghị ekwe omume ịme usoro ole na ole mbụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ngwanrọ na iPhone gị. Ka anyị banye n'ime, n'ihi ya ị nwere ike ịkwụsị iti mkpu 'My iPhone na-amalitegharịa!' na pusi.
1. Ndabere gị iPhone
Tupu anyị emee nchọpụta nsogbu ọ bụla ma ọlị, jide n'aka na iPhone kwadoro ndabere. Ọ bụrụ na iPhone gị nwere nsogbu ngwaike, nke a nwere ike ịbụ ohere ikpeazụ gị ịkwado data gị. Ọ bụrụ na anyị kwesịrị, anyị ga-eweghachi iPhone gị na usoro ọzọ, ma ịchọrọ nkwado ndabere tupu ị weghachi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyere nkwado ndabere gị iPhone , Akwụkwọ nkwado Apple nwere ọmarịcha ije. Ozugbo ị kwadoro, ị ga-adị njikere ịmalite idozi nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na iPhone gị na-amalitegharịa ma ọ bụ ọ bụrụ na iPhone gị na-agbanye ma gbanyụọ.
2. Melite ngwanrọ nke iPhone gị (iOS)
Dị ka Windows na PC ma ọ bụ OS X na Mac, iOS bụ sistemụ arụmọrụ nke iPhone gị. iOS mmelite mgbe niile nwere ọtụtụ ndozi maka ngwanrọ ngwanrọ na nsogbu ndị ọzọ. Oge ụfọdụ, ngwanrọ ngwanrọ na-edozi nsogbu nke na - eme ka iPhone gị malitegharịa ma ọ bụ tinye aka ịmalitegharị.
Iji lelee ma mmelite ngwanrọ ọ bụla dị, gaa na Ntọala -> General -> Mmelite Ngwanrọ . Ọ bụrụ na mmelite dị, wụnye ya. I nwekwara ike jikọọ iPhone gị na kọmputa gị ma jiri iTunes iji melite ngwanrọ iPhone gị. Ọ bụrụ na gị iPhone na-ibidogharịa, iTunes nwere ike ịbụ nzọ kacha mma gị.
3. Kpebisie ike na ọ bụrụ na ihe App na-eme gị iPhone ka Malitegharịa ekwentị
Ọ dị oke obere ngwa iji mee ka iPhone malitegharịa ma ọ bụ gbanye ma gbanyụọ ya ugboro ugboro. N'ihi na ọtụtụ akụkụ, software na gị iPhone na-echebe site nsogbu ngwa. N'ikwu ya, enwere ihe karịrị nde 1.5 na App Store ma ha niile ezughi oke.
Ọ bụrụ na ị wụnye ngwa tupu iPhone gị abanye na Malitegharịa ekwentị, wepu ngwa ahụ wee hụ ma nsogbu ahụ ọ na-edozi onwe ya.
Ntọala -> Nzuzo -> Nchịkọta -> Data nchịkọta bụ ebe ọzọ ịlele maka nsogbu ngwa. Ọ bụ ihe nkịtị ịhụ ọtụtụ ntinye na ndepụta a. Pịgharịa gaa na ndepụta ahụ ngwa ngwa wee chọọ ngwa ọ bụla edepụtara ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịchọta otu, iwepu ngwa ahụ nwere ike idozi iPhone gị.
4. Tọgharia Ntọala niile
Tọgharia Ntọala niile abụghị ihe anwansi, ma ọ nwere ike idozi ụfọdụ nsogbu ngwanrọ. Gaa na Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala niile iji weghachi ntọala iPhone gị na nrụpụta ụlọ ọrụ. Gaghị efunahụ ngwa ma ọ bụ data gị ọ bụla, mana ị ga-abanye paswọọdụ Wi-Fi gị ọzọ.
5. Wepụ Kaadị SIM gị
iPhone ịmalitegharịa loops nwere ike kpatara nsogbu na njikọ iPhone gị na onye na-ebu ikuku gị. Kaadị SIM gị jikọtara iPhone gị na ụgbọelu ikuku gị, yabụ iwepụ ya bụ ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu ebe iPhone gị na-amalitegharị.
Echegbula: Ọ dịghị ihe nwere ike ịgahie mgbe ị wepụrụ kaadị SIM gị. Gị iPhone ga ozugbo reconnect gị ụgbọelu ka anya dị ka ị na-etinye ya azụ na.
sexy ihe ịkpọ enyi gị nwanyị
Ihe nkwado Apple banyere esi ewepu kaadi SIM site na iPhone gi ga-egosi g? kp? ebe ebe kaadi SIM d? na iphone g? ’Ll ga-eji ihe mpempe akwụkwọ iji kpopụta SIM tray site na iPhone gị.
Ọ bụrụ na iwepụ kaadi SIM gị na-edozi nsogbu ahụ, tinye kaadị SIM ahụ na iPhone gị. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ laghachite mgbe i tinyere kaadi SIM gị, ị ga-eweghachi iPhone gị (nzọụkwụ 7) ma ọ bụ dochie kaadị SIM ahụ na onye na-ebu gị.
Ọ bụrụ na iwepụ kaadị SIM anaghị edozi nsogbu ahụ, etinyela kaadị SIM gị rue mgbe ị mechara usoro ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere kaadi SIM nke iPhone gị, lelee isiokwu m akpọ “Gịnị Mere My iPhone asị No SIM Kaadị?” .
6. Ike Tọgharia
Ikwesighi ime nrụpụta siri ike na iPhone gị belụsọ ma ọ dị oke mkpa. Ọ dị ka ịgbanye kọmputa desktọọpụ site na ịmịpu ya na mgbidi. N'ikwu ya, iPhone malitegharia akaghị bụ otu n'ime oge ahụ ebe nrụzigharị siri ike dị mkpa.
Iji rụọ ọrụ nrụpụta siri ike, jide bọtịnụ ike na Igodo ụlọ (okirikiri bọtịnụ n'okpuru ihuenyo) n'otu oge ruo mgbe gị iPhone ihuenyo aga oghere na Apple logo na-apụta.
Na iPhone 7 ma ọ bụ 7 Plus, bọtịnụ ndị ị chọrọ pịa iji mepụta nrụpụta siri ike dị iche. N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ ike na olu ala button.
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 8, 8 Plus, ma ọ bụ X, usoro nke nrụpụta siri ike dịkwa iche. Pịa ma hapụ ndị olu elu button , mgbe ahụ olu ala button , mgbe ahụ pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ .
N'agbanyeghị ụdị iPhone ị nwere, jide n'aka na ị jide ma mkpọchi ala ọnụ dịkarịa ala 20 sekọnd . O juru ndị mmadụ anya mgbe ha batara na Storelọ Ahịa Apple na m ga-edozi iPhone ha nwụrụ anwụ ngwa ngwa na nrụpụta siri ike. Ha chere ha mere nrụzigharị siri ike n'ụlọ, mana ha ejideghị bọtịnụ abụọ ahụ ogologo oge.
Ọ bụrụ na i wepụrụ kaadị SIM gị iPhone na nzọụkwụ gara aga, ugbu a bụ oge dị mma tinye ya na iPhone gị. Anyị ewepụla ohere na kaadị SIM gị na-eme ka iPhone gị malitegharịa. Echere na nrụpụta siri ike ga-edozi nsogbu ahụ ebe iPhone gị malitere ịmalitegharị, ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu, ị ga-emegharị ngwaọrụ gị site na isoro ntuziaka ndị dị n'okpuru.
7. Weghachi gị iPhone Iji iTunes
Iweghachi iPhone gị na-ehichapụ ma weghachite software nke iPhone (iOS), ọ nwere ike iwepụ ọtụtụ nsogbu ngwanrọ n'otu oge. Mgbe anyị weghachite iPhone gị, anyị ga-ewepụ ohere na nsogbu sọftụwia nwere ike ime ka iPhone gị malitegharịa - ọ bụ ya mere Apple techs ji eme ya mgbe mgbe.
Gị iPhone kwesịrị jikọọ na kọmputa iji weghachi. Ekwadoro m ime ụdị mweghachi pụrụ iche nke Apple techs na-akpọ a DFU Weghachi , nke na-abanye miri emi karịa iweghachi oge niile ma nwee ike idozi nsogbu ndị ọzọ. Gaghị ahụ ya ebe ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ Apple - gụọ isiokwu m iji mụta olee otú DFU weghachi gị iPhone .
Mgbe iweghachite ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịbugharị ozi nkeonwe gị niile site na ndabere iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud. Ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu, laghachite ebe a ma gaa n'ihu na-agụ.
8. Nyochaa maka Nsogbu Akụrụngwa
Nsogbu akụrụngwa bụ ihe kpatara iPhones na-arapara na mmalite Malitegharịa ekwentị. Ọ bụrụ na ị na-eji ikpe na iPhone gị, wepụ ya tupu ị gaa n'ihu.
Lee anya na odori n'ọdụ ụgbọ mmiri na ala nke gị iPhone. Lelee iji hụ ma ihe mkpofu ọ bụla dị n'ime ya na maka ihe ịrịba ama nke nrụrụ.
Ọ bụrụ na ihe adịghị anya nke ọma, jide nha nha ncha ị na-ejighị ma jiri nwayọ hichaa ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ. A obere circuit ma ọ bụ ndị ọzọ nsogbu n'ime odori n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ime ka ụdị nile nke nsogbu na gị iPhone.
ipad kwuru paswọọdụ na -ezighi ezi maka wifi
9. You nwere ike ịrụkwa gị iPhone
Anyị ewepụla ihe nwere ike ịbụ nsogbu sọftụwia na - eme ka iPhone gị malitegharịa ma anyị enyochala maka nsogbu ngwaike na mpụga nke iPhone gị. Ọ bụrụ na gị na iPhone bụ na a Malitegharịa ekwentị akaghị, gị iPhone eleghị anya kwesịrị idozi.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịchọta enyemaka na Storelọ Ahịa Apple dị na mpaghara gị, gbaa mbọ hụ na ị nwere oge ị ga-anọrọ na Ogwe Genius ka ị ghara ichere gburugburu. Uzo ozo di oke ala Pulse , ọrụ ndozi mail na-arụ nnukwu ọrụ.
Site na nke a, enwere m olileanya na anyị edozila nsogbu nke mere ka iPhone gị malitegharịa. Ọ ga-amasị m ịnụ ahụmịhe gị na ngalaba nke dị n'okpuru, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịjụ ha na Payette Na-aga n'ihu Facebook Group.
Echiche kacha mma,
Best iPhone Controlgba Cha Cha njikwa Na 2020
Etu aga agbanyụ ya esi enweta ego na Mac n’ime ụzọ atọ dị mfe!
Okwey On iPhone: Ihe Ọ bụ & Kachasị mma VPN Maka iPhone ngwa!
Olee otú Iji nweta nseta ihuenyo na iPhone: Ntuziaka Dị Mfe!
Etu aga-esi kwado iPhone Iji iCloud Na iOS 12: Ntuziaka Ndenye!
Gịnị Bụ Isgbọelu Ọnọdụ On iPhone? Nke a bụ Eziokwu!
Ekwentị Mobile Mobile Update na iPhone Okpu? Lee ihe kpatara ya na azịza ya!
Kedu ka m ga-esi gbanyụọ ederede amụma na iphone?
My Sprint App-adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ndozi!
Kedu ihe ọ pụtara mgbe ị rọrọ nrọ na mmadụ na -anwa igbu gị?
My iPad agaghị emelite! Nke a bụ The Real Idozi.
Gịnị kpatara iPhone X Ji Achọpụta? Nke a bụ Eziokwu!
AirPods agaghị ejikọta na Apple Watch? Nke a bụ The Real Idozi!
My iPhone agaghị ejikọ na Bluetooth! Ebe ị ga-ahụ ihe ngwọta dị irè!
Mbugharị App adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ ndozi (Maka iPads Too)!
iPhone Camera Ntọala, kọwara!
Mbugharị ngwa anaghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ azịza ya (maka iPads kwa)!
iPhone Agaghị Ejikọ na Apple Watch? Nke a bụ ndozi!